🥇 ▷ Redmi 8A wuxuu noqon doonaa aaladda ugu horumarsan dhaqaalaha leh USB-C ✅
Redmi 8A wuxuu noqon doonaa aaladda ugu horumarsan dhaqaalaha leh USB-C
Xiaomi, gaar ahaan astaantiisa casmi, waxay si isdaba joog ah u muujisay inay leedahay ku dhawaad ​​tayada / qiimaha aan la jaanqaadi karin ee heerka dhexdhexaad ah Ka caansan, halkii taxanaha dhaqaale ee Redmi A, laakiin gudaha Hindiya, sababtuna tahay qiimaha oo aad u hooseeya, waxay heshay guul weyn. Dhawaan kadib redmi note 8 Pro reerka casmi wuxuu diyaar u yahay in la ballaariyo kuwa cusub Redmi 8A. Heerka gelitaanka cusub ee astaanta ayaa lahaan doonta muuqaalada cusub ee laxiriira xaddiga qiimaheeda.
Sidoo kale aqri: redmi note 8 Pro ayaa yimid Talyaaniga: waa tan qiimaha!
REDMI 8A AYAAN UGU YIHIIN TAHAY SIYAASADDA Suuqa
The Sebtember 25-keedii gudaha Hindiya mid cusub ayaa lagu soo bandhigi doonaa Redmi 8A. Telefoonkan casriga ahi wuxuu ku fadhiyi doonaa isla kan kala duwanaanta qiimaha ee hadda Redmi 7A laakiin waxay yeelan doontaa warar muhiim ah inkasta oo qiimaha aad u hooseeya. Dhab ahaantii Manu Kumar Jain, madaxweyne ku xigeenka Xiaomi iyo agaasimaha qaybta Hindida, wuxuu muujiyey muuqaal hordhac ah oo ku saabsan naqshada Redmi 8A. Intaa waxaa sii dheer waxay soo saartay bayaanno qaar ka mid ah nolosheeda cusub: waxay noqon doontaa aaladda ugu horreysa, oo ku kala duwan qiimeheeda, inay lahaato USB-C iyo taageerada degdegga ah.
Taleefishinka casriga ah ee uu muujiyey Jain laga soo bilaabo marka la eego qaabka qurxinta leh waxay u dhigantaa sawirrada Redmi M1908C3KE dhawaan laga diiwaan galiyay TENAA. Sida ku cad shahaadada TENAA taleefanka casriga ah wuxuu lahaan doonaa a 6.21 inji leh dhibco dhibic iyo xallin u dhigma 720 x 1520 pixels. Jirka dhexdiisa waxaa jiri doona a octa-core chipset oo leh inta ugu badan ee 2.0 GHz (waxay noqon kartaa Snapdragon 439 ama astaanta cusub ee 460).
Qalabka waa inuu ku soo baxo seddex nooc oo kaladuwan oo lagu gartey tiro badan oo xusuusta ah: 2/16 GB kala duwanaanta aasaasiga ah, 3/32 GB midka dhexe iyo, tan ugu khiyaanada badan ayaa lahaan doonta 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ah xusuusta gudaha. Dhammaan kala duwanaantu waxay ku taageeri doonaan fidinta xusuusta iyada oo loo marayo Micro SD. Waxaa jira kamaradda ugu weyn yeelan doonaa hal dareeraha ka 12 MP, halka kamarad hore yeelan doonaa dareeme ka 8 MP. Wax walba waxaa ku shaqeyn doona batari deeqsinimo leh 5000 mAh.
Sawirka shahaadada TENAA ee Redmi 8A | Evosmart.it
Dabcan waxaan rajeyneynaa in tani ay tahay oo keliya kan ugu horreeya liiska aaladda dheer taasi waafajin doontaa Heerka USB-C qaybta ugu dhaqaale ee suuqa. Faa’iidooyinka heerarkan ayaa haatan aan la dafiri karin xitaa qaybaha dhaqaalaha ugu badan ee suuqa, marka la eego wax ku oolnimada iyo wax wada qabsiga.